Kooxaha biyaha weli ku jira ayaa kaalinta 2-aad ka gala tartan waara oo caalami ah | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Ardayda Dugsiga Sare ee Stillwater ee kala ah Claire Abbott iyo Addie Foote waxay ku guuleysteen kaalinta 2-aad ee Mashruuca Green Green Challenge, oo ah tartan waara oo caalami ah. Dhalinyaradu waxay ku tartamayeen seddex caqabadood maalin kasta inta lagu jiro bisha Oktoobar oo ay ka horjeedaan qiyaastii 5,000 koox oo ka socda ardayda dugsiga sare iyo kuwa kuleejka ah. Iyagoo kasbaday inay u gudbaan finalka, waxay la jaanqaadeen lataliye waxayna horumariyeen oo ay fuliyeen Mashruuca Waxqabadka Cimilada.
Iyagoo ku dadaalaya inay wax ka bedelaan ardayda ku nool degmada gudaheeda, Abbott iyo Foote waxay hormood ka ahaayeen laba dadaal: tan hore, inay u doodaan SAHS inay isu bedesho mid cagaaran, qorraxda soo saarta dugsiga sare, iyo tan labaad, si ardayda loo baro isticmaalka tamarta iyo ilaalinta.
Mashruucooda Waxqabadka Cimilada, waxay ka caawiyeen qaybinta 1,250 xirmooyinka tamarta iyo waxtarka biyaha ardayda kale, sameynta iyo wadaagista fiidiyow si ardayda looga wacyi galiyo waxtarka tamarta, iyo u soo bandhigida soo jeedinta tamarta qoraxda degmada dugsiga, iyadoo lagu bartilmaameedsanayo baalayaasha cadceedda saqafka sare. dugsiga sare.
Intii lagu gudajiray wajigii koowaad ee tartanka bishii Oktoobar, kooxuhu waxay barteen arrimaha deegaanka waxayna ku tartamayeen caqabadaha maalinlaha ah. Kooxda 'Stillwater' waxay dhammeeyeen caqabad kasta waxayna ku dhammeeyeen maamuuskii ugu sarreeyay ee 21 ee caqabadaha maalinlaha ah! Hawlkarnimadooda, adkeysigooda, iyo hal-abuurnimadooda waxay ku kasbadeen inay xaq u yeeshaan inay u tartamaan mid ka mid ah 16-ka ugu dambeeya ee fursad u heli doona inay soo bandhigaan mashruucooda waxqabadka cimilada oo ay u tartamaan inay ku guuleystaan maalgelinta mashruucooda.
Waxaan mahad gaar ah u celinayaa macalimiinta Ms. Brown iyo Mr. Weaver taageeradooda.
Waxbadan ka baro mashruucooda oo fiiri koontadooda Instagram .